Baarlamaanka Puntland oo ansixiyey qandaraaska DP World ee dekada Boosaaso - BBC News Somali
Dekada Boosaaso waxaa maamuli doonta shirkadda DP World ee laga leeyahay Imaaraadka muddo 30 sano ah
Baarlamaanka Puntland ayaa cod aqlabiyad ah ku meelmariyey labo heshiis oo dowlad goboleedka Puntland ay la gashay labo shirkadood oo ajnabi ah xili ay jirto hubanti la'aan ku saabsan waxa ay dowladda federaalka ka ogtahay heshiisyadaasi.
Kulanka baarlamaanka waxaa fadhiyey 60 xildhibaan, waxaana heshiisyada u codeeyey 59 xildhibaan, hal xildhibaana waa uu ka horyimid.
Heshiiska ugu muhiimsan waa kan shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ay ku dhiseyso, kadibna maamulkeeda kula wareegeyso dekada Boosaaso .
Heshiiskani oo uu madaxda shirkadda la saxiixday madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas horraantii sanadkan ayaa waxa uu ku kacayaa lacag dhan $336 milyan , waxayna shirkadda balaarin ku samaynaysaa dekada, kadibna maamulaysaa muddo 30 sano ah.
Heshiiska labaad waxaa lala saxiixday shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha oo lagu magacaabo CCECC , wuxuuna ku saabsanyahay dhismaha waddada isku xirta Eyl iyo Garoowe iyo waliba waddo kale oo isku xirta Eyl iyo Garoowe.
Shirkadda CCECC waxa ay horey u dhistay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Boosaaso.
Dekada Boosaaso waxaa la sheegey in ay aad ciriiri u tahay , ayna adagtahay in dhawr markab ay mar kaliya kusoo wada xirtaan.
Inta dhismaha socdo, DP World waxa ay dhisi doontaa deked yar oo macmal ah oo shaqada kusii kala socoto inta dekada weyn ay diyaar noqoneyso.
DP World iyo dekadaha Soomaaliya
Shirkadda DP World oo maamusha dekada weyn ee magaalada Dubai ayaa waxa ay heshiisyo ula saxiixatay jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland si ay uga shaqeysa bllaarinta hawlaha dakadda Berbera.
DP World waxa ay maamusha dekada weyn ee Dubai
Sidoo kale bil ka hor waxaa soo baxay warar sheegaya kulan dhexmaray madaxda DP World iyo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, kulankaasina waxaa la sheegey in looga wada hadlay dekad laga dhisi doono magaalada Baraawe. Illaa iyo hadda ma jiraan illo madax banaan oo BBCda u xaqiijiyey kulankaasi.